Jiilka Dahabiga ah Ee Real Madrid Ee Dunida Kusoo Socda | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Jiilka Dahabiga ah Ee Real Madrid Ee Dunida Kusoo Socda
(05-09-2017) Markii suuqyada Yurub furmeen, kooxuhu waxay bilaabeen inay lacago badan ku farraqaan ciyaartooyo la garanayo oo gudaha qaaradda jooga iyo kuwo aan weli soo shaac bixin oo kooxahooda ku dhex qarsoon, laakiin Real Madrid qorshe kaa ka duwan ayay samaysay.
Waxay tagtay qaaradda Latin America, gaar ahaan Brazil, halkaas oo ay heshiis kula gashay wiil 16 jir ah oo dunidu ay magaciisa maqashay markii ay Madrid lacag dhan 45 milyan oo Euro ka bixisay.
Vinicius Junior waa wiil madow oo jidh ahaan dhisan, orodkiisa iyo xirfaddiisa xarragada leh ayaana intii uu heshiiska Real Madrid saxeexay kaddib, ay dad badan daawadaan.
Way jiri karaan kuwo ku dooda in lacagta ay laga bixiyey ay ahayd khamaar, hase yeeshee, inta Madrid taageersan ama ka agdhow ciyaartoygan oo dhawr kulan oo kaliya u saftay kooxdiisa waxay kuu caddaynayaan in uu u qalmo, haddii sannad uu sii joogi lahaana uu qiimihiisu gaadhi lahaa laba jibbaar.
Marco Asensio, waa wiilka ugu da’da yar kooxda koowaad ee tababare Zidane, waana ciyaartoyga loogu hadal haynta badan yahay marka laga reebo Ronaldo. Sannadkii 2014 ayay Real Madrid ku iibsatay 3.5 Milyan Euro oo kaliya, laakiin maanta waxa uu qiimihiisu dhaafayaa 100 milyan oo Euro.
21 jirkan ayaa ku koray caasimadda Spain ee Madrid, tababarka kooxda Real-na waxa ku gacan qabtay Zinedine Zidane, isla markiibana waxa uu usoo dallacsiiyey kooxda koowaad. Hibada ciyaareed iyo jidhkiisa dabacsan ee dhaqdhaqaaqu u sahlan yahay, waxay laacibkan ka dhigeen mid ay dunidu isha ku wada hayso.
Qorshaha Suuqa iyo jiilka dahabiga ah ee Real Madrid ay dooneyso inay mar wada-hawl-galaan waxa ka dhantaalmay Kylian Mbappe oo Zidane iyo madaxweyne Florentino Perez ay ku adkaatay inay ka dul qaadaan PSG oo amaah kaga qaadatay Monaco, hase yeeshee, dhibaato kuma aha.
Sannadka 2017, suuqa iibka ciyaartoygu wuxuu xidhmay iyadoo Real Madrid soo iibsatay ciyaartooyo aan lagac badan ku kicin, laakiin suuqa gelisay dhawr kale oo ay ka faa’iidday lacag badan.
Martin Odegaard, mada-daaliyaha xarfadda iyo goynta ee ka riwaayadsada ciyaartooyada kasoo horjeeda, ayaa udub-dhexaad u noqon doona jiilka dahabiga ah ee Real Madrid, kaas oo sannadkii 2015 ay ka hor qaadday Bayern Munich, hase yeeshee wakhtigan amaah ugu ciyaara Heevenveen.
Odegaard waxa uu galay taariikhda Real Madrid, waana ciyaartoygii ugu da’da yaraa ee waligii u safta kooxda koowaad, taasina waxay dhacday 2015. Kulamada jogotada ah iyo Heevenveen uu u ciyaaro, ayaa uu ku muujiyey inuu yahay libaax dunida kusoo socda.
Kaliya kuma jiro taariikhda Real Madrid ee ciyaartoygii ugu da’da yaraa ee u safta, hase yeeshee, waxa kale oo uu noqday laacibkii ugu da’da yaraa ee weligii u ciyaara xulka qaranka Norway.
Saddexdan ciyaartoy, Asensio, Vinicius Junior iyo Odegaard oo lagu daray raxan kale oo ku sugan kooxda oo khadka dhexe iyo dhinacyadaba ah, waxay noqon doontaa Real Madrid koox dunida taariikh cusub ka dhigta marka ay iska garab saftaan.